के तपाईंले फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने, हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ ! – Kantipur Np
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८ समय: ६:५८:२२
हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसावारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभकारी हो ।
फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्वले भरिएको हुन्छ । फर्सीको साग भिटामिन ई, सी, ए, बी ६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थको राम्रो स्रोत हो । हामीलाई स्वस्थ रहनका लागि शरीरमा यि सबै तत्वको आवश्यक्ता पर्दछ।युएसडीए नेशनल न्युट्रिएन्टको अध्ययन अनुसार फर्सीको पातमा यति धेरै गुणहरु हुन्छ कि तपाईँलाई खतरनाक रोगबाट जोगिन मद्दत गर्छ ।
फर्सीको पातलाई आफ्नो नियमित भोजनमा समावेश गरेर तपाईँ उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगबाट सुरक्षीत रहन सक्नु हुनेछ ।
फर्सीको पातको नियमित सेवनले हुने फाइदाबारे…
–बढ्दो उमेरलाई छेक्न
–प्रजनन क्षमतामा वृद्धि
–छालाको लागि फाइदाजनक
–पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ
Last Updated on: September 21st, 2021 at 6:58 am